Fiarahabana ireo ray aman-dreny 31/01/2021
Mampahafantatra antsika fa kasaina ho tanterahana ny alahady 31/01 ho avy izao ny fiarahabana ireo ray aman-dreny eto amin'ny fiangonantsika, toy ny efa fanao isan-taona (Ray aman-dreny mihoatra ny 65 taona sy ny Pastora). Ho tanterahantsika amin’io fotoana io ihany koa ny famangiana terabao an’i Pastora mianakavy. Hisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo ary ao amin'ny Chapelle Eglise Saint Jacques no hiangonantsika. Ny Tompo anie hitahy antsika hatrany.
Ilazana isika rehetra fa hisy Culte isika rahampitso izay ho tanterahana ao amin'ny Chapelle Eglise Saint Jacques. Ny adiresy 161 avenue Pedro de Luna 34070 MONTPELLIER. Hanomboka à 11 ora toy ny mahazatra ny fotoana ary hisy ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo.
Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lohan'ny fiangonana, mampatsiahy ary manentana antsika mpiangona fa ny fotoam-pifohazana dia manomboka amin'ny 20h ny sabotsy 09/01/2021 ho avy izao ary anasana antsika rehetra ao amin’ny application jitsi meet.
Mampatsiahy fa ny alahady 10 janoary 2021 indray ny SALOMA vao manohy indray ny fianarana. Toy ny mahazatra, miditra amin'ny 10 ora ao amin'ny salle Tourrière Saint Jean de Védas ary atomboka amin'ny fampianarana teny malagasy. Mirary soa indrindra tompoko.